वस्तुगत परिषद्लाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता - Karobar National Economic Daily
वस्तुगत परिषद्लाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता
query_builderMarch 30, 2017 2:05 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility398
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं वार्षिक साधारणसभा यही चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । साधारणसभाले महासंघको आगामी तीनवर्षे कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्य चयन गर्नेछ ।
महासंघमा नेतृत्वका आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन् । अध्यक्षका लागि निर्वाचन नहुने भए पनि अन्य पदका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसमध्ये अधिकांश आकांक्षीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपय समीकरण मिलाउन दौडधूप गरिरहेका छन् ।
महासंघका ९९ वस्तुगत संघबाट चयन हुने यस क्षेत्रको उपाध्यक्षले यी संघबीचको समन्वय स्थापित गर्ने तथा सबै क्षेत्रको नीति निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवाप्रदायकहरूको निर्वाचनबाटै खारिएर नेतृत्वमा आउने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने भएकाले यसमा परिपक्व नेतृत्व रहने मान्यता छ ।
यद्यपि, महासंघ नेतृत्वमा वस्तुगततर्फको मतभार भने सबैभन्दा कम अर्थात् २० प्रतिशत मात्रै रहने गरेको छ । यसपटक वस्तुगत उपाध्यक्षका लागि तीन जना बहालवाला कार्यकारिणी समिति सदस्य आकांक्षी देखिएका छन् । कार्यसमितिमा वस्तुगततर्फबाटै निर्वाचित भएका गलैंचा व्यवसायी अनुपबहादुर मल्ल, पस्मिना व्यवसायी शंकरप्रसाद पाण्डे र औषधि व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठ मैदानमा छन् ।
तीनैजना उम्मेदवार महासंघको राजनीतिमा निकै परिचित अनुहार पनि हुन् । यसमध्ये श्रेष्ठले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने पाण्डे र मल्लले निकासीजन्य उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
हालको कार्यसमितिमा पाण्डे बैंक तथा बिमा समितिको सभापति छन् । यस्तै, मल्ल निर्यात प्रवद्र्धन समितिको सभापति र श्रेष्ठ उद्योग समितिका सभापति हुन् । तीनै जना प्रतिस्पर्धीका एजेन्डा, महासंघको भूमिका तथा समकालीन अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी ः
संगठन सुदृढीकरणका लागि काम गर्छु
शंकरप्रसाद पाण्डे उपाध्यक्षका प्रत्याशी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभा तथा निर्वाचनमा तपाईंले वस्तुगत क्षेत्रबाट उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगत १२ वर्षदेखि सक्रिय छु । लगातार तीनवटा चुनाव लडेर वस्तुगत संघमै काम गर्दै आएकोे व्यक्ति हुँ । हालसम्म केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य भएर काम गरेको अनुभव छ ।
त्यो अनुभवलाई काम गरेर देखाउन पदाधिकारी हुनु जरुरी छ । महासंघमा सबैजसो अधिकार पदाधिकारीमै निहित हुन्छ । वस्तुगतसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दालाई सामाधान गर्न अनुभवी व्यक्ति चाहिन्छ । अहिले वस्तुगत क्षेत्रमा ३÷४ वटा मुद्दा निकै जल्दोबल्दो रूपमा छन्, ती मुद्दालाई सामाधान गर्न मेरो उम्मेदवारी आवश्यक छ ।
यसमा सबै साथीको आग्रह पनि यही नै हो । वस्तुगत समूहले देशभरका प्रतिनिधिलाई समेट्छ । सबै प्रकारका उत्पादन यो समूहमै पर्छन् । आफ्नो औचित्य कायम गर्न महासंघमा २० प्रतिशत मात्रै भोटर हिस्सा छ ।
जबकि जिल्ला÷नगरमा ३० प्रतिशत छ । २० प्रतिशत वेटेज हाम्रा लागि पर्याप्त होइन । यसका लागि विशिष्ट संरचना आवश्यक छ भनेर लागेको छौं । महासंघभित्र बसेर संस्थागत विकास र वस्तुगत विकासका लागि सचिवालयलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
वस्तुगत संघहरूको क्षेत्रगत विकास गर्नुपर्छ । सेवा, पर्यटनलगायतका पाँचवटा क्षेत्रगत विकासका लागि कमिटी बनाएर ती संस्थाका समस्या र समाधानका लागि वर्कआउट गर्ने गरी संरचना तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । बैंकको लोन जुन सामूहिक समस्या हो, सामूहिक रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा नीतिगत, लबिङदेखि धारणाजस्ता कुरामा वस्तुगत संघलाई समेटर जानेछु ।
वस्तुगत क्षेत्रमा सबै आफ्नो संघ–संगठनमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच चुनिएर आउनुभएका अध्यक्षहरू नै मतदाता हुनुहुन्छ । उहाँहरू जस्तो यो संघ संगठनको राजनीति बुझेका मतदातालाई कसरी रिझाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
वस्तुगत समूहका सबै मतदाता आफ्नो संस्थाका सक्षम व्यक्ति नै हुन् । उहाँहरू बुझेको र परिस्थितिलाई केलाएर आउन सक्ने नै हुनुहुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा म कति समय लागेको छु, इतिहास कति छ, के कस्ता काम गरें भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । विगतका कामको मूल्यांकन गर्दै उहाँहरूले म जस्तो जिम्मेवार र परिपक्व व्यक्तिलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । म समय दिन सक्ने र काम गर्न सक्ने तथा अनुभवी उम्मेदवार हुँ भन्ने लाग्छ । उहाँहरूले पनि त्यही रूपमा पाउनुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
तपाईंले महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने तीनवर्षे कार्यकालमा के गर्नुहुन्छ ?
संगठनको विकास र विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि मैले काम गर्नेछु । वस्तुगत संगठनहरूको विकास र विस्तारका साथै नीतिगत कुरामा सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहुँच विस्तारमा सहयोग मैले गर्नेछु ।
नियमित समस्यालाई पनि मैले नजिकबाट बुझेकाले त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगेर सम्बोधन गर्नेछु । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राट्रिय संस्थासम्म पुगेर पनि मैले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु ।
निर्यात क्षेत्रमा हेर्ने हो भने निर्यात प्रवद्र्धन, इन्सेन्टिभका कुरा छन्, कृषिमा कमर्सिएलाइज तथा बफरस्टक, व्यापारमा ट्रेड ब्यालेन्स, उद्योगमा कच्चा पदार्थदेखि सेवामा भ्वालुएसनलगायतका धेरै कुरा छन् । यी सबै क्षेत्रलाई मैले राम्ररी बुझेको छु र काम गर्न सक्छु । सामूहिक समस्या र बैंक लोनका कुरालाई पनि सँगै अगाडि बढाउनेछु ।
महासंघमा गुटबन्दी धेरै भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै स्वतः अध्यक्ष बनाउनेसहितका व्यवस्था गरियो, तर तपाईंहरू त प्यानलै बनाएर अघि बढिरहनुभएको छ । यसले विधान संशोधनको औचित्य सकिएको भन्न मिल्दैन र ?
गुटबन्दी धेरै भयो, अब यसलाई कम गर्नुपर्छ भनेर महासंघको विधान संशोधन गरिएको थियो । विधान संशोधन नहुँदैदेखि गुटबन्दीको सुरुवात महासंघमा भइसकेको थियो । जुन स्पिरिटका लागि विधान संशोधन गरिएको हो, त्यो अहिले भएको छैन ।
विधान संशोधनकै पक्षमा लाग्नुभएका संयोजक नै एउटा गुटलाई लिएर हिँड्नुभएको छ । जुन स्पिरिट विधानले परिकल्पना गरेको थियो अहिले भएको छैन । हामीले पनि त्यो अनुभव गरेका छौं । महासंघमा गुट अन्त्यका लागि विधान संशोधन गरिए पनि अहिले त्यो देख्न सकिएको छैन जुन सत्य हो ।
महासंघभन्दा शक्तिशाली विभिन्न वस्तुगत संघहरू नै भइसकेका छन्, तपाईंहरू भने यसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै रुमल्लिइरहनुभएको छ । यसले भोलिका दिनमा जसले जिते पनि चुनौतिको सामना गर्नु नपर्ला र ?
हाम्रो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । वैरभाव गर्ने मेरो व्यक्तिगत चरित्र छैन । केही वैरभाव भए पनि त्यसलाई चुनावको अर्काे दिन बिर्सनुपर्छ । ममा त्यो क्षमता छ । भोलिका दिनमा वस्तुगत संघहरू समेटेर महासंघले पहल गर्छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन दिनेछैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेट्छु
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभा तथा निर्वाचनमा तपाईंले बस्तुगत क्षेत्रबाट उपाध्यक्षको दाबेदारी गर्नुभएको छ । तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
महासंघमा संलग्नताका हिसाबले मैले चार कार्यकाल पूरा गर्दै छु । सबै कार्यकाल सफल पनि भएका छन् । निर्यात प्रवद्र्धन समिति मैले चार कार्यकालदेखि सम्हाल्दै आएको छु । निर्यातका एजेन्डालाई सफल रूपमा उठाउन सकेको छु ।
यो भन्दा अगाडिको चुनावमा पनि अत्यन्त सफल भूमिका निर्वाह गरेकाले अत्यधिक भोट पाएर जितेको हुँ । खसेको ८७ मा ६७ भोट पाएको थिएँ । राम्रो काम गरेकैले उहाँहरूले मलाई भोट दिनुभएको हो । त्यो सफलता र अनुभवलाई मैले समग्र वस्तुगत क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ भनेर वस्तुगत उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
वस्तुगत क्षेत्रमा सबै आफ्नो संघ–संगठनमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच चुनिएर आउनुभएका अध्यक्षहरू नै मतदाता हुनुहुन्छ । उहाँहरूजस्तो यो संघ संगठनको राजनीति बुझेका मतदातालाई कसरी रिझाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
वस्तुगत परिषद्मा ९९ वटा वस्तुगत संघले मतदान गर्छन् । मलाई वस्तुगत संघ हाँकेका अध्यक्षले नै भोट दिने हो । आफ्नो संस्थालाई सफल नेतृत्व दिन सकेका अध्यक्षहरूले महासंघमा वस्तुगत उपाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था छ । उहाँहरूले सक्षम, समय दिन सक्ने, जिम्मेवार व्यक्ति छान्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । जुन विश्वास मैले काम गरेर देखाएको पनि छु । वस्तुगत उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि मैले झनै उहाँहरूको विश्वास र अपेक्षालाई पुरा गर्न कटिबद्ध भएर लाग्नेछु ।
तपाईंले वस्तुगत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने तीनवर्षे कार्यकालमा के गर्नुहुन्छ ?
९९ वटा वस्तुगत क्षेत्र भनेको उत्पादन, सेवा र व्यापारभित्र पर्छन । सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन छन् । शिक्षामा आईटी, बीपीओ कल सेन्टर पोटेन्सियल क्षेत्र हुन् । स्वाथ्यमा हस्पिटललगायत जति पनि समस्या ओझेलमा परेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
त्यस्तै धार्मिकदेखि नेचरसँग सम्बन्धित पर्यटनमा ध्यान दिनेछु । उत्पादनमूलक क्षेत्र निकै कमजोर छ । हिजो निर्यात गरेका वस्तु आज आयात भएका छन् । यसका लागि कृषिदेखि विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्नेछु । यसमा क्षेत्रगत काम गरेका साथीहरूलाई सहभागी बनाइ पावर विकेन्द्रित गरी उत्पादन बढाउन पहल गर्नेछु ।
व्यापारमा आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । यसमा जबसम्म हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्दैनौं तबसम्म आयात कम हुन सक्दैन । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन महासंघमा विज्ञको अभाव छ । क्षेत्रगत रूपमा एक्स्पर्ट राखेर सेवा उत्पादन र व्यापार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन काम गर्नेछु । हाम्रा वस्तुगत संघहरू सक्षम छन्, तर सचिवालय राख्ने ठाउँ छैन । महासंघको पछाडि भएको जमिनमा कम्प्लेक्स बनाएर छरिएर रहेका संघलाई एकैठाउँमा ल्याउन मैले पहल गर्नेछु ।
महासंघमा गुटबन्दी धेरै भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनेसहितका व्यवस्था गरियो, तर तपाईंहरू त प्यानलै बनाएर अघि बढिरहनुभएको छ । यसले विधान संशोधनको औचित्य सकिएको भन्न मिल्दैन र ?
विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाले महासंघमा सवै राजनीति सकियो भन्न मिल्दैन । सही व्यक्ति छान्नका लागि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया रोजिएको छ, यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दिने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मैले गुटबन्दी भयो भन्दिनँ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढेको छ, यसमा स्वच्छ निर्वाचन हुन्छ । त्यसमा साथीहरूले सही व्यक्ति र टिमलाई भोट दिएर विजयी बनाउनुहुनेछ ।
महासंघभन्दा शक्तिशाली विभिन्न वस्तुगत संघहरू नै भइसकेका छन्, तपाईंहरू भने यसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै रुमल्लिइरहनुभएको छ । यसले भोलिका दिनमा जसले जिते पनि चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ला र ?
चुनौती सबै क्षेत्र र सबै क्षणमा छन् । सक्षम प्यानल र व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने हो । वस्तुगततर्फ रहेका ९९ वटा संघले भोट हाल्दा कुनै हल्लामा गरिने कुरा होइन । सबै जनाले नेतृत्व तहमा बसेर काम गरेका व्यक्तिकै भोट आउने भएकाले असल र सक्षम नेतृत्व नै छान्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।
काम हेरेर मूल्यांकन हुन्छ भन्ने विश्वास छ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभा तथा निर्वाचनमा तपाईंले वस्तुगत क्षेत्रबाट उपाध्यक्षको दाबेदारी गरिरहनुभएको छ । तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
मैले महासंघमा बसेर ९ वर्ष काम गरिसकेको छु । अब मलाई के लाग्यो भने वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने समय आयो । किनभने वस्तुगत संघ नै एकजुट हुन सक्दैनन् भने देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।
त्यसो नभए विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि सक्षम व्यक्ति र टिम नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ टिम नै मिलाएर आएका छौं । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र वस्तुगतबाट मसहितको टिमनै बनाएका छौं । महासंघमा केही गरेर देखाउनकै लागि टिम नै मिलेर आएका छौं । एक्लो व्यक्तिले छाता संगठनमा केही गर्न सक्दैन त्यसैले टिम आवश्यक छ ।
वस्तुगत क्षेत्रमा सबै आफ्नो संघ–संगठनमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच चुनिएर आउनुभएका अध्यक्षहरू नै मतदाता हुनुहुन्छ । उहाँहरू जस्तो यो संघ–संगठनको राजनीति बुझेका मतदातालाई कसरी रिझाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
वस्तुगत संघ–संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूसँग म निरन्तर ९ वर्षदेखि सँगै छु । विभिन्न वस्तुगत संगठनका लागि मैले काम गरेको छु । अहिले म उद्योग समितिको सभापति छु । सबै वस्तुगत संघका कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएर काम गरेको छु । मेरो व्यक्तित्व होइन, कामलाई हेरर उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । मैले उहाँहरूलाई काम गरेर देखाइसकेको छ । अब नेतृत्वमा पुगेपछि थप काम गर्नेछु । मेरो जितको आधार नै ९ वर्षसम्म गरेको कामको मूल्यांकन हो ।
तपाईं महासंघमा वस्तुगत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो भने तीन वर्षे कार्यकालमा देख्न सकिने के काम गर्नुहुन्छ ?
हामीसँग इन्स्टिच्युसन मेमोरी निकै कम छ । हामीले डेटावेस बनाएर नेपालका सबै उद्योगको सम्पूर्ण डेटा राख्छौं । अहिले उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुनै डाटा छैन । भोलिका दिनमा लगानी गर्न आउने, लगानी थप्न चाहने तथा सरकारले माग्दा समेत हामीले डेटा दिन सक्छौं । अहिले त उद्योगको अवस्थाका बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । हाम्रा लागि आवश्यक भनेको डेटा हो, जुन मलगायत मेरो टिमले काम गर्नेछ । डेटा भएपछि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ हुन्छ ।
महासंघमा गुटबन्दी धेरै भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनेसहितका व्यवस्था गरियो, तर तपाईंहरू त प्यानलै बनाएर अघि बढिरहनु भएको छ । यसले विधान संशोधनको औचित्य सकिएको भन्न मिल्दैन र ?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा अहिलेको अवस्थाबाट माथी हुनुहुन्छ । कुनै पनि गुटमा हुनुहुन्न । भोलि हुने अध्यक्ष राणा कुनै पनि गुटमा हुनुहुन्न । म एक्लै वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा जिल्ला उपाध्यक्ष एक्लैले केही गर्न सक्दैन । प्यानल बनाउने कारण पनि टिममा काम गर्नलाई हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वस्तुगत उपाध्यक्ष र जिल्ला नगरको उपाध्यक्षको एउटै इफोर्ट हुनुपर्छ ।
महासंघभन्दा शक्तिशाली त विभिन्न वस्तुगत संघहरू नै भइसकेका छन्, तपाईंहरू भने यसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै रुमलिइरहनुभएको छ । यसले भोलिका दिनमा जसले जिते पनि चुनौतिको सामना गर्नु नपर्ला र ?
महासंघ सबैसँग संगठनको छाता संस्था हो । अहिले जिल्ला नगरका १०४ वटा र वस्तुगत ९९ वटा संस्था छन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जित÷हार सहज रूपमा लिनुपर्छ । चैत ३० गते सबै निर्णय सुनेपछि अहिलेको दूरी घटाएर सबै जना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले जिते पनि हामीसँगै काम गर्छौं । म हारेँ भने महासंघ छोड्दिन र अरूक साथीहरू पनि छोड्नुहुन्न ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष